Orinasa sy mpanamboatra Silika hafa any Shina | SJJ
Ireo entana silika dia ampiasaina tsirairay ary mivondrona na mitambatra amin'ny zavatra hafa izay nahatonga ny tontolontsika ho tsara tarehy kokoa, ny fiainantsika mety sy mahaliana kokoa. Ireo entana silika dia hita hatraiza hatraiza izay ampiasain'ny tsirairay na inona na inona olon-dehibe na ankizy.
Ny fitaovana silicone dia manana toetra mampiavaka:
* Malemy sy henjana amin'ny karazana habe sy endrika rehetra
* Fanoherana mangatsiaka sy mafana, fanoherana ny rano ary diovina mora hifanaraka amin'ny toetry ny andro
* Sakafo ara-tsakafo, tontolo iainana sy tontolo iainana mety amin'ny sakafo sy ny sakafo
* Maharitra sy ductility nandritra ny fotoana ela ampiasaina
* Ny logo miloko dia manintona amin'ny fijerin'ny maso sy ny fampiroboroboana, ny doka ary ny fanomezana sns.
Izahay Pretty Shiny Gift dia manana entana silicone hafa misy bobongolo ho an'ny bobongolo mahafatifaty ranomandry, bibin-jaza, satroka tavoahangy, solomaso divay, marika solomaso divay sns. Ireo mpamorona manan-tsaina dia mbola manandrana mamorona entana silika bebe kokoa hihaonana amin'ny mpanjifa. Tongasoa ireo volavolanao na inona na inona. Alefaso azafady ny fanontanianao amin'ny fotoana rehetra raha mila fampahalalana bebe kokoa, fifandraisana matihanina, vokatra avo lenta, tolotra tsara indrindra no hatolotra ao anatin'ny fotoana fohy!
Fitaovana: fitaovana Silicone
Teo aloha: Fitaovana an-dakozia vita amin'ny silikola
Keychains vita pirinty